Himalaya Dainik » सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको फेरिएको ‘आसन’को कारण के हो ?
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको फेरिएको ‘आसन’को कारण के हो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भयो । अन्य दिनको भन्दा फरक र महत्वपुर्ण मानिएको सचिवालय बैठकको शुरुमा नै अन्य दिनको भन्दा फरक परिदृष्य देखियो । त्यो हो, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को बस्ने आ’सन फेरिनु ।
अन्य बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत सबै सदस्यभन्दा फरक कुर्सीमा आसिन हुन्थे ।उनी सबैलाई समुह बनाएर केहि निर्देशन दिएजस्तै मुद्रामा केहि टाढा सबैको सामुन्य रहने गरेका थिए । भने शनिवारको बैठकमा ओली-दाहाल हाराहारी कुर्सीमा रहेका छन् । बैठक शुरु हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उक्त तस्वीरहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा पहिले
गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओली-प्रचण्डको आ’सनसँगै थिएन। त्यस दिन प्रचण्डले आफू कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि बस्ने ठाउँ हेरफेर गरिएकोमा असंतुष्टि जनाएका थिए।
सचिवालय बैठक र केन्द्रीय कमिटीमा पनि अध्यक्ष बस्ने ठाउँ नमिलेको प्रचण्डको भनाइ थियो। ‘अध्यक्षहरूको कुर्सी राख्ने कुरामा फरक गरिएको छ’ भन्ने प्रचण्डको असंतुष्टि थियो। यहि असन्तुष्टिका कारण नै दुबै अध्यक्षको कुर्चि समान ठाँउमा राखिएको नेकपाका एक नेताले बताए ।
सचिवालय बैठकमा अहिले